आज फेरि सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको भाउ स्थिर ! हेर्नुहोस प्रति तोला कति पुग्यो…. – SUDUR MEDIA
March 14, 2021 AdminLeaveaComment on आज फेरि सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको भाउ स्थिर ! हेर्नुहोस प्रति तोला कति पुग्यो….
काठमाडौं, १ चैत । नेपाली बजारमा आज (आइतबार) सुनको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य प्रतितोला ४०० ले बढेको हो । शुक्रवार तोलामा ८६ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आइतवार तोलामा ८६ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै आइतबार तेजाबी सुन तोलामा ८६ हजार १५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै आइतवार चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । शुक्रबार तोलामा १२७० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आइतबार पनि सोही मूल्यमै कारोबार भएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्: शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबल आजदेखि सुरु ! सहिद स्मारक ‘सी’ डिभिजन लिग फुटबल आजदेखि सुरु हुँदैछ । लिगको पहिलो दिन आज दुई खेल हुँदैछन् । दिउँसो साढे १२ बजे एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा खालीबारी युथ क्लब र झापा एफसी खेल्ने छन् ।
यस्तै, दिउँसो साढे ३ बजे ओसिस क्लब र चर्च ब्वाइज युनाइटेड खेल्ने छन् । प्रतियोगिता आउँदो २४ गतेसम्म हुनेछ । प्रतियोगितामा १४ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् ।
सहभागी टोलीलाई २ समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहको शीर्ष ३ टोलीले सुपर सिक्स चरणमा पुग्ने छन् । सुपर सिक्सको शीर्ष ३ टोली ’बी’ डिभिजनमा बढुवा हुनेछ । यस्तै समूहको पुछारमा रहेको दुई टिमले प्ले अफ खेल खेल्नेछ । प्ले अफमा पराजित हुने टिम रेलिगेसनमा पर्नेछ ।